Rajoelina tao Antsirabe: “Mijoro ho an’ny vahoaka malagasy aho…” | NewsMada
Rajoelina tao Antsirabe: “Mijoro ho an’ny vahoaka malagasy aho…”
Anjaran’ny any Antsirabe indray ny notsidihin’ny mpanorina ny IEM, Rajoelina, ny faran’ny herinandro teo. “Tsy mitady fahefana, tsy mitady voninahitra, tsy mitady tombotsoa manokana aho amin’izao mirotsaka hofidina izao fa mijoro ho anareo vahoaka. Hatao ny fomba rehetra hampandrosoana an’i Madagasikara. Betsaka ny zavatra hataotsika sy haorintsika eto”, hoy izy. Nambarany fa tonga ny tenany hihaino ny mangirifiry ny vahoaka sy ny hetahetany. “Inona ny tokony hatao. Hataontsika velirano ka hotanterahina ny holazaina rehetra”, hoy ihany izy. Notsiahiviny fa latsaka tao Antsirabe ny tavoniny ary teraka tany ny tenany. “Misy zavatra mampifamatotra antsika noho izany. Misy fihetseham-po manokana vao tonga teto aho. Misy adidy tokony hataoko izany eto. Tonga koa aho hitondra hazavana satria fantatro fa miaina ao anaty aizina ny tanora sy ny vahoakan’Antsirabe”, hoy ihany ny filohan’ny Tetezamita. Nambarany fa hitondra fampandrosoana ny tenany ary efa voasoratra daholo ny tetikasa. “Mijoro aho ho an’ny tanindrazana. Mino sy matoky aho fa tsy maintsy mandroso isika. Tsy ho tanteraka raha tsy miray fo sy miray saina isika”, hoy izy.
Tetikasa ho an’ny fambolena…
Natsidiny sahady fa manana tetikasa manokana hampiroboroboana ny fambolena ho an’ny faritra Vakinankaratra ny tenany. Tsy maintsy tonga eto ny fampandrosoana haingana sy maharitra, araka ny nambarany. Namaha olana avy hatrany ny mpanorina ny IEM momba ny lalana ka nanolotra tara hanentsenana ny lavaka ary hanomboka avy hatrany ny asa. Nitondra fitaovana manara-penitra ho an’ny hopitaly fiterahana koa ny tenany, ahitana « échographie avec sonde, stérilisateurs, brancards sy aspirateurs ».
Nialohavan’ny fitarainan’ny sokajin’olona samihafa izany. Eo ny faharatsian’ny lalana, ny tsy fisian’ny asa, ny fahantrana lalina, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny olana amin’ny fananan-tany ary ny tsy fisian’ny fotodrafitrasa ho an’ny tanora. Nanatrika ny lamesa fangataham-pitahiana hoan’ny fiangonana katolika Paroasy Notre Dame de Lourde Miaramasoandro koa ny tenany. Hiantoka manotolo ny fananganana izany ny mpanorina ny IEM ary hotokanana tsy ho ela izany.